Madaxweyne Trump oo Israel ka dalbaday arrin halis ku ah Ilhaan Cumar -News and information about Somalia
Home News Madaxweyne Trump oo Israel ka dalbaday arrin halis ku ah Ilhaan Cumar
Madaxweyne Trump oo Israel ka dalbaday arrin halis ku ah Ilhaan Cumar
Madaxweyne Trump oo dagaal siyaasadeed kula jira Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka ayaa Israel ka dalbaday arrin halis ku ah Ilhaan iyo gabadha kale ee Rashida Taib oo ay ku wada jiraan baarlamaanka dalkaasi.
Trump ayaa ugu baaqay Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu in uusan qaabilin Ilhaan Cumar iyo Rashida Taib oo bishan booqasho ku tegaya dalkiisa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shaaciyey in Ilhaan iyo Rashida labaduba ay ka mid yihiin cadowga Israel, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu ku eedeeyey in had iyo jeer ay ka shaqeeyaan arrimo ka dhan ah jiritaanka Israel.
Ugu dambeyn Trump ayaa kula taliyey Netanyahu in labadaani xildhibaan laga mamnuuco guud ahaan dhulka Israel.
Dagaalka u dhexeeya Madaxweyne Donald Trump iyo labadan gabdhood oo isku dhinac ah ayaa soo shaac baxay wixii ka dambeeyey doorashadii Mareykanka ee 2016-kii.
Previous articleGeeddi” Farmaajo marka uu xilka ka dego miyuu raadin doonaa maqaamka Xamar?
Next articleDEG DEG: Qorshe xilka looga qaadayo Wasiir Isloow oo socda & Go’aanka Kheyre
Preaching vs Practice: Can Hassan Dahir Aweys be the right person...